मेरो शेयरको मोवाइल एप सार्वजनिक, के के छन् विशेषता ? - सिम्रिक खबर
मेरो शेयरको मोवाइल एप सार्वजनिक, के के छन् विशेषता ?
काठमाडौँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले बुधबार मेरो शेयरको मोवाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । उक्त एप मार्फत लगानीकर्ताले मेरो शेयरको वेब भर्जनमा रहेका सबैखालका सेवा सुविधान पाउने भएका छन् । तर माइ आश्वाका सेवाहरु भने केही समयमा उपलब्ध हुने सिडिएसले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले एप मार्फत मेरो शेयरको सेवा प्रयोग गर्दा थप सहज एंव चुस्तता महसुस गर्न सकिने सिडिएसको विश्वास छ । परिक्षणको लागि भनेर सार्वजनिक गरीएको भने पनि सिडिएसले एप मार्फत गरिने कारोबारहरु आधिकारिक हुने भएकोले होसियार पुर्वक कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो हितग्राही खातामा मौज्दात रहेको शेयरको विवरण हेर्न, बजार मूल्यको पोर्टफोलियो हेर्न, आफ्नो स्वामित्वमा रहेका शेयरको लागतको भारित औषत गणना, कारोबार पछिको राफसाफ तथा फछ्यौटका लागि सम्बन्धित सदस्यलाई हस्तारण गर्नको लागि विद्युतिय पुर्जी जारी गर्न तथा प्राथमिक शेयरमा आबेदन दिने पाउने लगायतको सुविधाहरु दिदै आइरहेको छ । एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्न सकिनेछ ।